Darjeeling News, Kalimpong News, Kurseong News, Darjeeling Hills, Gorkhaland News by Darjeeling Times – “डा हर्कबहादुर छेत्रीको जीत निश्चित” – डा महेन्द्र पी लामा
“डा हर्कबहादुर छेत्रीको जीत निश्चित” – डा महेन्द्र पी लामा
Mar 31, 2016 DT Admin News, Politics, Top News Comments Off on “डा हर्कबहादुर छेत्रीको जीत निश्चित” – डा महेन्द्र पी लामा
जन आन्दोलन पार्टीका व्युरो चेयरमेन डा महेन्द्र पी लामाले दलका प्रार्थी डा हर्कबहादुर छेत्रीको जीत निश्चित रहेको दावी गरेका छन। दिल्ली दौडाहापछि मंगलबार कालेबुङ आइपुगेका डा लामाले दलको आन्तरिक बैठकमा भाग लिएका थिए। उनले आज व्युरोको बैठक सम्पन्न भएको पुष्टि गर्दै चुनाउलगायत साङ्गठनिक विषयबारे छलफल र निर्णय भएको जनाएका छन। उनले कालेबुङको चुनावी माहौल आफ्ना प्रार्थी डा हर्कबहादुर छेत्रीको पक्षमा रहेको ठोकुवा गरेका छन।
उनले डा छेत्रीको जीत शत प्रतिशत निश्चित रहेको दावी गर्दै भने, “हुन त चुनाउ भन्ने चुनौतिपूर्ण नै हुन्छ। तर हाम्रो प्रतिस्पर्धी दलको छवि अति नै घिनलाग्दो भइसकेको छ। उनीहरूले सधैँ झूठ मात्र बोलेको छ। भविष्यमा पनि उनीहरूले केही गर्न सक्ने छैन भन्ने कुरा जनताले बुझेको कारणले परिवर्तनको निम्ति जनताले हामीलाई भोट दिनेछन भने आशा छ। त्यसमाथि गोरामुमो र तृणमूलले सहयोग गरेको छ। यसकारण हाम्रो जीत निश्चित छ” जापका व्युरो प्रमुख महेन्द्र पी लामाले भने।
उनले मंगलबार कालेबुङमा सम्पन्न व्युरोको बैठकबारे खुलेर नबताए पनि केही महत्वपूर्ण कुराहरूबारे छलफल र निर्णय गरेको जनाएका छन। बैठकमा चुनावी रणनीति, डा छेत्रीको जीत सुनिश्चित गर्ने रणकौशल, साङ्गठनिक विस्तार, कालेबुङ जिल्लाको मुद्दा जस्ता विषयमा चलफल भएको उनले बताएका छन। उनले भने, “सभामा केही कुराहरू निर्णय लियौं। डा छेत्रीलाई जिताउनै पर्छ भन्ने कुरा बैठकको प्राथमिकतामा थियो। पार्टीको चुनावी रणकौशल बनायौं। चुनाउ जितेर के के गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्‍यौँ। विशेष गरी केन्द्र सरकारको योजनाहरू ल्याउने विषयमा चर्चा भयो। कालेबुङलाई जिल्लाको ठोस रूप दिने सम्बन्धमा हाम्रा रणनीति र कार्यनीतिबारे कुरा गर्‍यौं। पार्टीलाई दार्जीलिङ, खरसाङलगायत अन्य क्षेत्रमा कसरी बिस्तार गर्ने भन्नेबारे छलफल भयो। चुनावी जनसभाका मितिहरू तय गर्‍यौँ”
दलको गतिविधिमा केही समययता देखा परेको उनको अनुपस्थितिलाई केन्द्र गरी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै डा लामाले भने, “यसलाई म र पार्टीबीचको ग्याप भन्न मिल्दैन। म कहाँ र के गर्दैछु भन्ने कुरा पार्टीका साथीहरूलाई थाहा छ। प्रधानमञ्त्रीले मलाई दुइवटा एसाइनमेन्ट दिनु भएको छ। म त्यो काम गर्न पहाड बाहिर गएको थियो। यसमा शंका गर्नु पर्ने कुरा छैन”
उनले पार्टी गठन भएलगत्तै चुनाउ आएको अनि सबैतिर सांगठनिक आधार बलियो भइ नसकेको कारण कालेबुङबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा दलले उम्मेद्वार नदिएको स्पष्टिकरण पनि दिएका छन। हामीले दुइ कारणले प्रार्थी दिएनौं। एउटा कुरा त संगठनको आधार बलियो भइसकेको छैन अनि समय पनि कम थियो। यसकारण हामीले कालेबुङमा मात्र आफ्नो उम्मेद्वार उठायौं। तर दार्जीलिङ र खरसाङमा कुन दलका प्रार्थीलाई मत दिने भन्ने कुरा गोप्य रूपले आफ्ना सदस्यहरूलाई भनिसकेका छौँ” उनले भने। दलका उम्मेद्वार डा हर्कबहादुर छेत्रीको पक्षमा आयोजित जनसभाहरूमा उपस्थित रहेर चुनाउप्रचार गर्ने उनले जानकारी पनि दिएका छन।
3,494 total views,2views today
Election Commission Uses Natural Heritage to Attract Voters Legendary Composer and Singer SHANTI THATAL to be Awarded Narayan Gopal Memorial Award
6,644 total views, 5,772 views today
36,268 total views, 5,778 views today
52,480 total views, 5,775 views today
SpiceJet to launch operations from Sikkim from October 4. SpiceJet’s ninth UDAN destination. They will be operating daily direct flights on Pakyong-Kolkata and Pakyong-Guwahati route 52,507 total views, 5,775 views today Comments comments
52,507 total views, 5,775 views today
52,451 total views, 5,769 views today